Mba hiatrehana ny ady amin’ny valan’aretina coronavirus izay efa mamely an’ity firenen-dehibe ity no anton’io. Ny sekretera momba ny fampahalalam-baovaon’ny Maison Blanche Stepahinie Grisham no namoaka ny sary maneho ny taratasim-bola 100 000 dolara an’i Donald Trump ho an’ny sekreteran’io ministera io HHS Alex Azar. Nanao fanoloran-tena hanolotra ny karamany mandritra ny maha filoham-pirenena azy ho fanampiana ny Filoha Trump, ary tena mendri-piderana ny fampanantenany hiaro ny vahoaka Amerikanina, ary isan’ny goavana izao fiarovana amin’ny Coronavirus izao”, hoy i Grisham tao amin’ny Kaonty Tweeter. Efa nahatratra 10 ny olona matin’ny Coronavirus tany Washington. Mahatratra 100 mahery ny trangan’aretina voamarina any Amerika amin’izao fotoana izao. Eto amintsika, dia isan’ny teny nataon’ny Filoha Rajoelina ny hoe: tsy handray karama fa homeny ny faritra ny karamany. Asa faritra aiza sy iza avy no efa nisitraka an’izay fa toa tsy nisy tatitra?